World News Archive | Faaqidaad | Page 3
Somaliland oo dalbatay saanad ciidan
Somaliland waxay weydiisatay saanad ciidan isbaahaysiga uu hogaaminayo Sucuudigu ee go’doominta ku haya Qadar, sida ay Faaqidaad u sheegeen saraakiil ka tirsan maamulkaas. Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo wefti uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho deg deg ah ugu kicitimay Isutaga Imaaraadka Carabta. Siilaanyo inta uu ku suganyahay Abu-Dhabi ayaa la filayaa inuu si rasmi […]
Baarlamaanka Puntland oo kuraastii caaga ahayd laga bedelay
By Editor on 15. June 2017 World News
Baarlamaanka Puntland waxaa laga bedelay kuraastii caaga ahayd ee ay ku fadhiisan jireen oo ku hayey dhibaato, mudo dheerna ay dalbanayeen in laga bedelo. Maanta ayaa lagu baraarugay hoolka baarlamaanka oo u qaabaysan si caalami ah ayna yaaliin kuraas la dhigan kuwa ay ku fadhiistaan baarlamaanada dunidu. Madaxweynaha Puntland wuxuu booqday xarunta baarlamaanka si uu […]
Maraykanku wuxuu taageeray Al-Qaacida – Putin
By Editor on 13. June 2017 World News
Madaxweynaha Ruushka oo u waramayey Oliver Stone ayaa ku eedeeyey Maraykanka inuu ka masuul ahaa soo bixitaankii Al-Qaacida iyo maalgelinta hogaamiyahoodii hore Osama bin Laden. Washington waxay taageertay xoogagii xagjiray ee ku sugnaa Afqaanistaan si ay ula dagaalamaan ciidamadii Midowgii Soofiyeeti ee ku duulay dalkaas, ayuu yiri Putin. Vladimir Putin ayaa sheegay inay hayaan cadaymo […]
Iiraan oo maraakiib dagaal u dirtay Cumaan
By Editor on 12. June 2017 World News
Axadii ayey Iiraan ka dirtay dekeda koonfurta dalkaas ku taal ee Bandar Abbas labo markab oo ku wajahan Cumaan, sida ay ku warantay wakaalada wararka ee Tasnim. Markab wax burburiya oo lagu magcaabo Alborz iyo mid sahayda qaada oo loogu yeero Bushehr ayey Iiraaniyiintu u soo direen Cumaan, kuwaas oo hada maraya biyaha caalamiga ah. […]
Imaaraadka oo cunaqabatayn saaraya Soomaaliya
Xulufada uu hogaaminayo Sucuudigu ee go’doominta ku haya Qadar ayaa ugu baaqay waxay ugu yeereen dalalka ay walaalaha yihiin inay ku soo biiraan si cadaadiska loogu kordhiyo Dooxa. Sucuudigu wuxuu sheegay inuusan jiri doonin dal dhexdhexaad ah ee looga baahanyahay wadamada ay xiriirka fiican leeyihiin inay ku soo biiraan ama ay dhabarka u jeediyaan. Dalal […]
Maraykanka oo kaashanaya xulufadiisa Gobolka ayaa qaaday Axadii duqayn ka dhan ah Al-Shabaab taasoo jawaab u ahayd falkii ay dhowaan qaadeen maleeshiyada kooxdaas, sida ay sheegeen saraakiisha Waaxda Difaaca. Al-Shabaab oo ah koox mayal adag oo xiriir la leh shabakada Al-Qaacida ayaa weeraray Khamiistii saldhig ciidan oo uu lahaa maamulka Puntland, halkaas oo ay ku […]
Erdoğan oo u digay Farmaajo
By Editor on 11. June 2017 World News
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa uga digay dhigiisa Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu la safto xulufada Sucuudiga ee godoominta ku haya Qadar. Warbaahinta Turkiga oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan Madaxtooyada dalkaas ayaa sheegay inuu Erdogan wacay Farmaajo habeenimadii Sabtida si ay uga wadahadlaan qalalaasaha Bariga Dhexe. Madaxweynaha Turkigu wuxuu ku bogaadiyey dhigiisa Soomaaliya […]
Sababtee Somaliland u taageertaa Al-Shabaab?
Maamulka Somaliland wuxuu ku lug lahaa weerarkii 7da Jun, ay ku qaadeen deegaanka Af-urur maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, sida uu fahansanyahay Warsidaha Faaqidaad. Dad badan ayey la-yaab ku noqotay sida ay ugu suurtagashay inay qaadaan weerar xadigaas le’eg maleeshiyaadka ka dagaalama buuraha Galgala oo mudooyinkii dambe si weyn loo wiiqay. Maleeshiyaadka taabacsan Al-Shabaab ee […]
Wasiirkii Hawlaha Guud Cabaas Siraaji oo Muqdisho Aas-Qaran loogu sameeyay (Sawirro).
By Editor 10 on 4. May 2017 FEDERAL GOVERMENT, Gallery, News
Alle ha u naxariisto Wasiirkii Hawlaha Guud ee Soomaaliya ahaana mudane ka tirsan Gollaha Shacabka ee Soomaaliya, waxaa maanta galinkii dambe Aas Qaran loogu sameeyay Qabuuro ku yaal Isbitaalka Madiina ee Muqdisho. Salaada Jinaasada ayaa marxuunka lagula tukaday Masjid ku yaal Madaxtooyada Soomaaliya, waxaana ka qaybgalay Madaxwaynaha Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed cabdulaahi […]
Haweenka Puntland oo bogaadiyey Baseey
By Editor on 12. April 2017 World News
La taliyaha Madaxweynaha Puntland ee arrimaha haweenka Faadumo Bashiir Cabdisalaan ayaa bogaadisay doorkii ay ku lahayd Saafiyo Cabdulqaadir X. Xuseen (Baseey) heshiiskii dekeda Boosaaso. “Waxaan bogaadinayaa doorkii ay ka ciyaartay heshiiskii dekeda Boosaaso Saafiyo Baseey oo ahaa mid muhiim ah” Ayey tiri Faadumo. La taliyaha Madaxweynaha ee dhinaca haweenka oo maanta la hadashay warsidaha Faaqidaad waxay […]